समाचार Archives - crosscheck.com.np
काठमाडौं । स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्टार्ट–अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट–अप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा ...more
काठमाडौं । बि.ओ.के क्यापिटल मार्केट लिमिटेडको छैठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । क्यापिटलका अध्यक्ष महेश मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त साधारण सभाले आ.ब. २०७७/७८ को वित्तीय विवरणहरु पारित गर्नुका साथै आ.ब. २०७७/७८ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी २१ ...more
नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाडपर्वका अवसरमा असोज १९ गतेदेखि विभिन्न डाटा र भ्वाइस प्याक तथा रिचार्ज गर्दा बोनस सहितको पर्व अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफरहरु दशैंका अवसरमा असोज १९ गतेदेखि कार्तिक २ गतेसम्म उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी ...more
काठमाडौं । काठमाडौंको मुटुमा रहेको कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरले नेपालीहरुको महान चाडपर्व दशैं–तिहार लक्षित योजनाहरु ल्याएको छ । शपिङ्ग मलमा आउने ग्राहकहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी सिटी सेन्टरले यो योजना ल्याएको हो । किनमेल गर्ने ग्राहकहरुलाई मात्र योजनामा सामेल गर्ने ...more
काठमाडौंको । भृकुटीमण्डपमा नेपालका ख्यातिप्राप्त ब्राण्डहरुले सञ्चालनमा ल्याएको ‘दशैं सहुलियत जुत्ताचप्पल मेला’ मा उपभोक्ताहरुको भीड बढ्न थालेको छ । चाडवाड लक्षित मेलामा विशेष अफरसहित अपत्यारिलो मूल्यमा जुत्ता–चप्पल पाएपछि मेलामा ग्राहकहरुको आकर्षण चुलिएको हो । भृकुटीमण्डपको गेट छिर्नेबित्तिकै सानो चौरमा लागेको ...more
काठमाडौं । आइएमईले पर्व लक्षित दसैँमा डबलको डबलको डबल अफर सार्वजनिक गरेको छ । असोज १ देखि कार्तिक २६ (तद्अनुसार सेप्टेम्बर १७ देखि नोभेम्बर १२, २०२१) सम्म कायम हुनेगरि कूल ५७ दिनका लागि सेवाग्राहीमूखी उक्त अफर पानीपोखरीस्थित आइएमई केन्द्रीय कार्यालयमा ...more